Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုkonyaray တရားမျှတရေးဓါတ်ရထားလေလံရလဒ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
01 / 07 / 2013 Levent Ozen လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
2013 / 60280 အမှတ် Konya အုပ်ချုပ်ရေးရုံးအလုပ်နူးညံ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်လမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်းပရဝုဏ် Tramway လိုင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေူခင်း။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတင်ဒါတွင်ပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများကပေးတဲ့5ကမ်းလှမ်းမှု:
အဆောက်အဦး Center က + Yapıray: £ 53.817.217,12
Unitek Tour + ဆောက်လုပ်ရေး + EM: £ 58.254.000,00
Gülermak: £ 59.731.478,24
Yuksel ဆောက်လုပ်ရေး + FC အသင်းဆောက်လုပ်ရေး: £ 59.781.000,00
asyaray + Koçoğluဖက်စပ်: £ 68.873.615,33
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Konya ဓါတ်ရထား Line နဲ့တည်ရှိနေကျောင်းပရဝုဏ် Tramway LINE (အထူးအစီရင်ခံစာ) ၏တိုးတက်မှုအတွက်ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း 28 / 05 / 2013 Konya တရားစီရင်ရေးလမ်းရထားလိုင်းကို၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်Yaptırılacaktırကြောင့်ပုဒ်မပြည်သူပိုင်ဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 4734 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်လမ်းရထားလိုင်းကို၏ဥပဒေရေးရာဆောက်လုပ်ရေးလက်ရှိကျောင်းပရဝုဏ် Tramway လိုင်း KONYA စည်ပင်သာယာသိပ္ပံရေးရာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်လိုင်း 19 အမှတ်ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်းပရဝုဏ် Tram ဆေးတစ်လက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 60280 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Akdeniz ရပ်ကွက်အတွင်း Vatan Caddesi အဘယ်သူမျှမ:242060 SELÇUKLU / KONYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3322211400 - 3322211638 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: fenisleri@konya.bel.t ဃ) နု document ရဲ့အင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
အစား Konya Konyaray ၏ Metro ငါ့ကို revandu သလော 14 / 03 / 2013 Metro Konyaray အစား Konya Konya ငါ၏အမျိုးချစ်လှုပ်ရှားမှုပါတီနိုင်ငံတော်သမ္မတ AV revandu ရန်။ Tariq Taşcı "Metro စိတ်ဓာတ်ယခု Konyaray နဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့တစ်တွေကမ်ပိန်းစတင်အဆိုပါ Konyaray တုံ့ပြန်ရှောင်ရှားရန်ထားတဲ့အရောင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ ကျနော်တို့Konya'lıပေးသောဂတိတော်နှင့်ပြည့်စုံချက်တောင်းဆိုနေကြသည်။ Taleb မြေအောက်ပြုမိလျှင်။ "သူကဆိုသည်။ အဆိုပါ MHP Konya Metro သမ္မတ AV စေမည်ဟုဂတိတော်ကိုစွန့်လွှတ်မှတုံ့ပြန်။ Tariq Tasci ရေးသားထားသောကြေညာချက်တွင်အောက်ပါစကားလုံးများကိုအပေါ်မိမိနေရာမှအပ်ပေးတော်မူ၏။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးအလယ်ပိုင်းခရိုင်မြူနီစီပယ်နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်၏အစအဦးမှာနှစ်ခုအရေးကြီးသောသဘောတူညီချက်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ အတိုချုပ်သူတို့ကိုကိုလည်းဖြေရှင်းရန် ...
KONYARAY လိုင်း (ဗီဒီယို) ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်စနစ်များတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည် 09 / 11 / 2013 အသစ်ကရထားလမ်းလိုင်းများ 14 ကီလိုမီတာစနစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင် Aladdin-တရားမျှတရေးအကြားကျင်းပလိမ့်မည်, Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်: KONYARAY လိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်စနစ်များတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, 63 500 တထောင်သန်းပေါင်နှင့်အလုပ်အများဆုံးအဆင့်မြင့်စနစ်များတစျနှစျ 2015 အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်ပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာကြီးကိုကုန်ကျမည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Aladdin-ရထားလမ်းသစ်ရုံးအကြား Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြုခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Barracks လမ်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်, လေ့လာမှုရဲ့ start Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, Selcuk တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုဝယ်ယူရေးနှင့်အသစ်သောရုံးတည်နေရာနဲ့ Seljuk ၏ system ကိုရထားလမ်း၏ပေးပို့ဖျော်ဖြေ ...
Bursa T1 အတွက် Silkworm လမ်းရထားနှင့်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအယူမှားသတင်း (အထူးသတင်းများ) အကြောင်း 28 / 12 / 2012 အမျိုးသားရေးသတင်းစာများ၏ Silkworm လမ်းရထား T1 ကျနော်တို့ယနေ့သတင်းဖတ်သူကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိမယုံကြည်နိုင်, အလမ်းရထားအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်! မှားယွင်းသောနှင့်ကြီးမားသော T1 ဗဟိုဂိုဒေါင်အပြည့်အဝ Bursa Silkworm - ထိုရုပ်တုလိုင်းအကြောင်းကိုသတင်း, ငါတို့အောက်ပါထုံးစံ၌ fix ချင်: Durmazlar စက်ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 1) Silkworm / Silkworm နိမ့်အထပ် tramcars ။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကဒီပုံရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုကူညီပေးနေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေ 2) ဓါတ်ရထား tool ကိုတစ်လမ်းအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုရန်မအတားအဆီးလည်းမရှိပြီးစီးခဲ့နှင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ 3) silkworm မော်တော်ယာဉ်ဝန်နှင့်ပြောင်းလဲနေသောစမ်းသပ်ခြင်း 750 2,5 အကြောင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဂိုဒေါင်ထဲမှာBurulaş V ကို DC ကသရုပ်ြပပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကီလိုမီတာ။ 4) ...
TÜPRAŞ 300 ရထားကားများယူ
ဘူတာအပေါ်ပလက်ဖောင်း yht'y ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
အစား Konya Konyaray ၏ Metro ငါ့ကို revandu သလော
KONYARAY လိုင်း (ဗီဒီယို) ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်စနစ်များတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်
Bursa T1 အတွက် Silkworm လမ်းရထားနှင့်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအယူမှားသတင်း (အထူးသတင်းများ) အကြောင်း